Geerarsa - Wikipedia
Geerarsi gosa afoolaa ta'ee jecha mana rukutu kan nama onnachiisuun jiruu fi jireenya, gaddaa fi gammachuu, obsaa fi hamilee kan ittiin ibsataniidha. Geerarsa yeroo baayyee warra dhiiraatu gootummaa agarsiisufi geerara. Jireenya ummata Oromoo keessatti ergaa dabarsuuf tajaajila. Oromoon gerarsaan goota isaa faarfatee dhaadata.
Akaakuu Geerarsa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Geerarsa gosa lamatu jira. Innis geerarsa qondaalaa fi geerarsa gurgudduu jedhama. Geerarsi qondaalaa kan qondaalaan geeraramuudha. Qondaalaan nama duulee diina ofii ajjeesee kan mirgaan gale ykn bineensota bosona keessa jiraatan (leenca, gafarsa, arba, qeerransaa fi kkf) adamsee kan ajjeesedha. Isaan kun hawaasa keessa jiraatan biratti kabajaa fi ulfina qabu. Yeroo sirna ykn cidha tokkorratti sirbamu ykn geerarsi yeroo gahu isaantu dura geerara. Tartiiba mirga isaan ajjeesanii qabanii fi hawaasa sana biratti beekamaniin wal-duraa duuban geeraru. Yeroo geeraramu dura waaqa, dachee, midhaan, loon (saawwan) fi booka ykn daadhiitu faarfatama.
Geerarsa gurgudduu kan jedhamu nama duule hin ajjeefne ykn bineensa akka mirgaatti lakkaawu kan hin ajjeefneen geeraaramuudha. Isaan kun warra qondaalaa booda geeraru. Yeroo geeraranis hojii qabatanii jirani qonnaa fi waan kana fakkaatu irratti bobba’anirratti cimaa fi jabaa ta’uu isaanii ykn ammoo duulanii mirga dhabuu isaaniif gadda itti dhaga'ame, yaalii fi tattaaffii godhan, kanaafis ragaa qaban himachuun balasiin komachuun geeraru. Akkasumas jireenya isaanii keessatti karaa adda addaa dhiphuu fi roorroo isaan mudate haala adda addaan ibsatu.
Yeroo Qondaalli ykn gurgudduun geeraru, kanneen taa’anii dhaggeeffatan ishoo gurbaa jechuun jala cooqa ykn soosisa kan jedhamuun harkaa fuudhanii gargaaru. Kunis geeraraan sun akka afuura fudhatuu fi akka onnatuufi. Yookaan ammoo warra geerarsa beeku ykn qondaaltotaa fi gurgudduutu wal harkaa fuudhee dabareedhaan geeraru jechuudha.
Birbirsa mootii mukaa
Riqaa malee hinyaabani;
Birboo mootii galaanaa
Daakaan malee hince’ani;
Abbaan ofii mootii dha
Harmeen ofis giiftii dha
Mirga malee hinwaamani.
Kanaafuun boobe tume
Kanaafan booye du’e.
Qumxaa machallaa godhe
Balasiin abbaa godhee
Waanuman yaade godhee
Hodhemoo… nan barreesse?
Tolchemoo… nan balleese?
Abbaa koo yaa abbaa koo
Wayyaa kee kuula maru
Natu kuula marsiise
Maqaa kee duulli haabaru
Natu duula barsiise.
Qoteen baase maqaa kee
Akka guuboo dinnichaa
Hordeen dhaabe maqaa kee
Akka muka birbirsaa.
Abba koo ani jedhu kuni
Sooressa guutuu miti
Hiyyeessa duutuus miti
Gamna itti himatan miti
Raatuu ifatan miti
Hinqotata maasi isaa
Jaarsa dallaan waleensuu
Isa didaa qajeelchu
Yaa isa kan coome qalu
Isa kan doofeef faluu.
Yoo ajjeesan mucaa ta’u
Mucaa kurkuraa ta’u;
Hundatu nama dhungata.
Yoo dhaban budaa ta’u
Budaa furgummaa ta’u;
Hundatu nama tuffata.
Ameessa maalan godhaa?
Yeennaa borillee gu’e;
Si’achi maalfaan godhaa?
Yeennaan borillee du’e.
Moosisnaan korma ta’e
Tumamnaan qotiyyoo ta’e
Gurgurraan dhibba bite
Gunfureen dhimma fixe.
Si’achi maalan yaadaree?
Bajjii qotachuu malee
Qalbii horachuu malee
Goodarree dhaabuu malee.
Dhoobamee taa’u malee
Dhoobee dibachuu malee
Ulee qaldhoo qabachuu
Biyya abbaa koo taphachu.
Yoo foon taskaaraa malee
Gabaa Jimaataa malee
Sangaa magaala malee
Dhiqaa fagaaraa malee!
Akkam taanee akkas taane?
Akkamiin akkas taane?
Goommanaaf raafuu taane
Dhala abbaa raatuu taane
Hunduu nutti xaphatte
Muka nuugii taane kaa;
Hunduu nu bobeeffatte
Dhala luujii taane kaa
Hunduu nu odeeffattee
Akkam taanee akkas taanee?
Moofa uffattuu taane
Doofa of gattuu taane
Fayyaa dhukubsatu taane
Beekaa wallaalaa taane
Otoo qabnuu deegaa taane
Akkam goonee taanuree?
Kam goorree jalaa baanuree?
Inni Abbaan koo guddise
Kaballaan na kuffise
Inni abbaa koo tii gadii.
Hardha gaangeensaa sadii
Gaangeen biyyaaf barcuma
Ani hinyaabne takkumaa.
Kaabbortaan raroo taatee
Na geessee rakkoo taatee.
Fakkeenyaa Geerarsa gootaa
Goota goota caalu
Seenaan yoo gilgaalu
Goota biyyaaf kufu
Seenaan bira hin lufu
Oromoon sodaatee hin beekuu
Yoo sodaachise malee
Seenaan gootaa hindhumu
Yoo obsinee itti dhiifne malee
Zelalem Abera''Digga saaqoo''
↑ "Aadaa Geerarsa Oromoo: Jifaara saglan geerarsaa beektuu?". bbc.com.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Geerarsa&oldid=37097" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 12 Haggaya 2021, sa'aa 21:23 irratti.